Football Khabar » बुफोनले पिएसजी छाडे, रोनाल्डोसँग खेल्न युभेन्टस फर्किने !
बुफोनले पिएसजी छाडे, रोनाल्डोसँग खेल्न युभेन्टस फर्किने !
फ्रेन्च क्लब पिएसजीबाट खेलिरहेका इटालियन गोलकिपर बुफोनले पिएसजी छाड्ने आज क्लबले पुष्टि गरेको छ । क्लब पिएसजीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिजन सकिएसँगै बुफोनले क्लब छाड्ने पुष्टि गरेको हो ।
४१ वर्षीय बुफोन गत वर्ष मात्रै पिएसजीमा अनुबन्ध भएका थिए । तर, पेरिसमा एक सिजन बिताएपछि उनले क्लब छाड्ने भएका हुन् ।
गत सिजनको अन्त्यसँगै बुफोनले लामो समय बिताएको क्लब युभेन्टस छाड्ने घोषणा गरेका थिए । इटालियन बुफोन युरोपियन च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्य पूरा गर्न पिएसजी गएका थिए ।
तर, पिएसजी यसपटक पनि अन्तिम १६ बाटै आउट भएकाले बुफोन निराश भए । उनी पुनः इटाली नै फर्किने सम्भावना छ ।
बुफोनले पिएसजीमा करिअरको सबैभन्दा छोटो अवधि बिताए । उनी यसअघि सन् १९९५–२००१ सम्म इटालियन पार्माबाट खेलेका थिए । त्यसपछि सन् २००१ देखि २०१८ सम्म १७ वर्ष युभेन्टसबाट खेलेका उनले पिएसजीमा भने मात्रै एक सिजन बिताए ।
पिएसजीमा एक सिजन बिताउँदा उनले कूल २३ खेल खेले । उनले लिग वानमा १७ खेल खेल्दा च्याम्पियन्स लिगमा ५ तथा फ्रेन्च कपमा १ खेल खेले ।
पिएसजी छाड्ने घोषणासँगै बुफोन पूर्वक्लब युभेन्टस जाने सम्भावना प्रबल छ । उनले युभेन्टसका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग खेल्न चाहेका छन् ।
यो कुरा उनी आफैंले बताउँदै आएका छन् । गत वर्ष रोनाल्डो रियल छाडेर युभेन्टसमा अनुबन्ध हुँदा त्यत्तिबेला बुफोनले क्लब छाड्ने घोषणा गरिसकेका थिए । जतिबेला रोनाल्डो युभेन्टस पुगे, त्यत्तिबेला बुफोनले भनेका थिए– ‘कि म छिटो हिँडे कि उनी ढिला आए । यदि उनी यहाँ आउँछन् भन्ने उनले थाहा दिएको भए क्लब छाड्ने थिइनँ ।’
केही समयअघि लिग वानमा युभेन्टसले सिजनको ३७औं खेल आफ्नो घरमा खेल्दा बुफोन युभेन्टसको खेल हेर्न पुगेका थिए । त्यसबेला उनले रोनाल्डोसँग पनि भेट गरेका थिए ।
त्यसैबेला क्लबका अधिकारीसँग छलफल गरेका उनले युभेन्टस फर्किन सक्ने चर्चा सुरु भएको थियो । त्यसको करिब दुई सातापछि पिएसजीले बुफान अर्को सिजन क्लबमा नरहने निर्णय गरिदियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले बुफोन पुनः युभेन्टस फर्किने दाबी गरेका छन् । रोनाल्डोसँग खेल्न र च्याम्पियन्स लिग जित्ने सपना पूरा गर्न उनी अझै दुई सिजनसम्म युभेन्टसबाट खेल्न सक्नेछन् । रोनाल्डो र बुफोनबीच व्यक्तिगत रूपमा निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:२२